MMSC ၏ Downtown Strong Grants အတွက်လျှောက်လွှာ• DutchtownSTL.org • Dutchtown, St. Louis, MO
အတွင်းရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ UrbanMain ခရိုင် (အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် Grand, Meramec နှင့်ဗာဂျီးနီးယားတစ်လျှောက်) စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, စစ်ဆင်ရေးနှင့်အခြားအရာများအတွက်ကူညီရန်ရန်ပုံငွေနှစ်ခုအထိလျှောက်ထားနိုင်သည်။ Dutchtown အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထောက်ပံ့ငွေများကိုလျှောက်ထားရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကူညီရန်အဆင်သင့်ရှိနေသည်။
သင်သည်Aprilပြီ ၈ ရက်တွင်ထောက်ပံ့ကြေးပေးအပ်သည့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့တက်ရောက်ခဲ့ရမည် (သို့) သင်တက်ရောက်ခဲ့သည့်ရပ်ရွာကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ စိတ်မပူပါနဲ့၊ သူတို့ကမင်းကိုကူညီဖို့အဆင်သင့်ပဲ!
သငျသညျ DT2 ကနေထောက်ခံမှုစာလည်းလိုအပ်ပါလိမ့်မည် - ငါတို့သည်လည်းထိုအတူကူညီပေးဖို့ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်!
ထောက်ပံ့ငွေလျှောက်ထားရန်အကူအညီလိုပါသလား။ DT2 မှစေတနာ့ဝန်ထမ်းများသည်အိမ်နီးချင်းဆန်းသစ်တီထွင်မှုစင်တာတွင်မေလ ၁ ရက်၊ မနက် ၁၀ နာရီမှည ၃ နာရီထိသင့်လျှောက်လွှာကိုအခမဲ့ဖြည့်စွက်ရန်။ သင်၏ထောက်ပံ့ကြေးလျှောက်လွှာကိုအီးမေးလ်ဖြင့်သာပြင်ဆင်ရန်သင်နှင့်တွေ့ဆုံရန်နောက်တစ်ကြိမ်စီစဉ်နိုင်သည် nate.a.lindsey@gmail.com.
လျှောက်လွှာတင်ချိန်သည်မေလ ၇ ရက်နေ့တွင်အဆုံးသတ်ပါမည်။ သင်ငါတို့လွဲချော်လျှင် အိမ်နီးချင်းဆန်းသစ်တီထွင်မှုစင်တာတွင်နာရီဖွင့်ပါ သင်၏ထောက်ပံ့ကြေးလျှောက်လွှာကိုဖြည့်စွက်ရန်ကူညီရန်ကျွန်ုပ်သည်စနေနေ့၊ မေလ ၁ ရက်၊ သင်သည်လျှောက်လွှာကိုဤနေရာတွင် download လုပ်နိုင်သည်.
ဒီ post ကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဒီ post ကိုနောက်ဆုံးပေါ် update လုပ်ခဲ့သည် မေလ 2nd, 2021 .
ဒိန်းမတ် စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား MMSC ၏ Downtown Strong Grants အတွက်လျှောက်ထားပါ